मेरो तिन तोला सुन | Nagarik News - Nepal Republic Media
मेरो तिन तोला सुन
२९ वैशाख २०७५ ८ मिनेट पाठ
हिजो कै मात्र कुरा हो । अफिसबाट आएर घर के पुगेको थिएँ, मेरो सातो उड्यो । कारण, घरको मूल ढोका खुलै थियो । कोठा पनि खुलै थियो । अझ सबैभन्दा ठूलो कुरा त दराज पनि खुलै थियो । घरको यो अवस्था देखे पछि बुझिहालियो, घरमा चोर पसेको रहेछ । त्यो पनि दिउँसै।
दराजमा रहेको तीन तोला सुन गायब पाएँ । अरु सानातिना कुरा पनि छैनन् । तर, तिनका दाँजोमा तीन तोला सुन महत्वपूर्ण देखियो । चोरले घरमा भएको सबैभन्दा ठूलो कुरै चोरेका रहेछन् । म त अनायासै चिच्याउन पुगेछु क्या रे । छिमेकी दाइ र भाउजुहरू ‘के भो ? के भो ?’ भन्दै दौडेर आउनुभयो । चोरीको कुरा बताएँ । तीन तोला सुन हराएको पनि सुनाएँ । अब के गर्ने ?मैले नै भनेँ, ‘दाइ, पुलिसमा एउटा रिपोर्ट हाल्नुपर्ला । पुलिसले खोजिदेला कि ?’भाउजुले भन्नुभयो, ‘हो नि, एउटा रिपोर्ट त हाल्नै पर्ला । पुलिसले चोर पनि समाउला, सुन पनि भेटाउला । बरु अहिले नै रिपोर्ट राख्नुपर्ला।’
दाइले केही भन्नुभएन । पुनः मैले नै भनेँ, ‘हुन्न दाइ ? रिपोर्ट हाल्नुपर्ला नि हगि ?’दाइले विस्तारै बोल्नुभयो, ‘रिपोर्ट हाल्नु त ठीकै होला । तर रिपोर्ट हाल्दैमा पुलिसले खोज्न सक्ला र ?’‘किन दाइ ? पुलिसले खोज्न सक्दैन ? पुलिसले नसके कसले सक्छ त ?’दाइले भन्नुभयो, ‘हराइरहेको त्यत्रो तेत्तिस किलो सुन त अहिलेसम्म भेट्टाउन सकेको छैन भने तिम्रो त्यो जाबो तीन तोला भेट्टाउला र ?’
हँ ? म झस्केँ । अहिले बजारमा तेत्तिस किलो सुनको खुब ठूलो चर्चा चलिरहेको छ । सुन हराएको महिनौँ भइसक्यो । अहिलेसम्म भेटिएको छैन । अहिले सम्पूर्ण देशकै ध्यान तेत्तिस किलो सुनमा गएर अडेको छ । कहाँ गयो होला त्यत्रो सुन ? सबैतिर एउटै प्रश्न छ ।साँच्चै कहाँ गयो होला त्यो सुन ? मलाई आफ्नो तीन तोला सुन कहाँ गयो भन्दा पनि तेत्तिस किलो सुन कहाँ गयो भन्ने चिन्ता पो लाग्न थाल्यो । तेत्तिस किलो सुन भनेको तेत्तिस किलो आलु होइन । आलु हराए त एकैछिनमा भेट्टाइन्छ भने सुन किन भेटिएन ? हप्तौँ भइसक्यो । भेटिएको छैन।
देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्किँदै गइरहेको छ भनिन्थ्यो, हो रहेछ । शान्ति त थाहा भएन । सुरक्षा चाहिँ खस्केकै हो । आज तेत्तिस–तेत्तिस किलो सुन त एकैछिनमा हराउने स्थिति छ भने सुरक्षाको स्थिति कति खस्केको होला, त्यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सुन्छु, विमानस्थलबाट सुन आइसकेको थियो रे । बाहिर पुग्दा हरायो रे । ल हेर्नोस् ! कति फितलो सुरक्षा ? मलाई त अब यो देशको सुरक्षा प्रणालीप्रति कुनै विश्वास रहेन । तेत्तिस–तेत्तिस किलो सुन त यसरी हराउँछ भने हाम्रो दुइ चार तोलाको के सुरक्षा हुन्थ्यो र ?
फेरि यो हराएको सुन कुनै ऐरेगैरेको पनि होइन । तस्करको सुन हो । तस्कर भने पछि बुझ्नुहुन्छ होला नि, उनीहरूको आगेपिछे कति मानिस हुन्छन् । पुलिस प्रशासन त पूरा उनीहरूको गोजी मै हुन्छ । एअरपोर्टका सारा कर्मचारी उनीहरूकै इशारामा नाचिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक नेताहरू उनीहरूकै घरमा भात खान जान्छन् ।
पार्टीहरू उनीहरूकै चन्दाले चुनाव जितिरहेका हुन्छन् । मन्त्रीहरू उनीहरूकै भाषा बोलिरहेका हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूकै सुन हरायो । त्यो पनि तीन तोला होइन । तेत्तिस किलो ! (तीन तोला त मेरो हराएको हो ।) भनेपछि देशको सुरक्षास्थिति कति कमजोर भइसकेको रहेछ आफै बुझ्नुस् । त्यत्रो ठूलो तस्करको सुन त अब यो देशमा सुरक्षित छैन भने हामी जस्ता सर्वसाधारणको सुन के सुरक्षित होला र ?
मैले आश मारेँ । जुन पुलिस प्रशासनले त्यत्रो तेत्तिस किलो सुन त आजसम्म भेट्टाउन सकेको छैन मेरो तीन तोला के भेट्टाउन्थ्यो र ? मैले रिपोर्ट दर्ता गर्ने विचार त्यागेँ । यसले बेकारमा पुलिसलाई अर्को तनाव मात्रै थपिनेछ ।
तै पनि मन मानेन । मेरो सुन नभेट्टाए पनि तेत्तिस किलो भट्टाइसकेछ कि ? भेट्टाइसकेको रहेछ भने मेरो पनि भेटिने सम्भावना त छ । मैले प्रहरी कार्यालयमा फोन गरेर तेत्तिस किलो सुन बारे जानकारी लिन चाहेँ ।‘हेलो ! प्रहरी कार्यालय हो ?’‘हजुर जय नेपाल । भन्नुस् के सेवा गर्नुपर्यो ?’
‘भर्खरै मेरो तीन तोला सुन हराएको छ । रिपोर्ट लेखाउँ कि भनेर....’‘ओहो, अहिले यो तीन–चार तोला सुन हराएको कुरै नगर्नोस् । हामी त तेत्तिस किलो सुन खोज्दाखोल्दै हैरान छौँ ।’‘अनि यो तेत्तिस किलो सुन खोजीको स्थिति चाहिँ कहाँ पुग्यो त सर ?’‘हामी खोज्दैछौँ । नेपाल प्रहरीको सारा शक्ति नै अहिले तेत्तिस किलो सुनको खोजीमा लागिरहेको छ । हामीलाई आशा छ । हामी छिट्टै नै सुनको नजिक पुग्नेछौँ । हस् त जय नेपाल ।’
पुलिसलाई कुरा गर्ने समेत फुर्सद छैन । शायद सुनको खोजीमा जान हतार भएकोले होला।वास्तवमा अहिले बजारमा सुन मात्र होइन सुन ल्याउने तस्कर कता भाग्यो भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर नेपाल प्रहरी चाहिँ यति बेला तस्करलाई छोडेर सुनकै पछि लागिरहेको रहेछ । प्रहरीलाई पनि तस्करको भन्दा सुनकै बढी चिन्ता लागेको रहेछ । प्रहरी जति सबै सुनको पछि लागे पछि तस्करलाई हाइसन्चै भएको होला । यस्तो गम्भीर अवस्थामा मेरो तिन तोला सुनको के कुरा गर्नु ?
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७५ ०८:३७ शनिबार